तीन सय रुपैयाँमै सकियो बिहे, चप्पलमा देखिए दुलाहा ! – USNEPALNEWS.COM
तीन सय रुपैयाँमै सकियो बिहे, चप्पलमा देखिए दुलाहा !
अहिलेको समयमा तीन सय रुपैयाँमा विहे सम्पन्न भएको कुरा सुन्दा तपाईलाई विश्वास लाग्छ ? तर, भएको छ यस्तै ।
शिक्षा अभियन्ता उत्तम सञ्जेलले तीन सय रुपैयाँमा आफ्नो विहे सकाएका छन् । ४१ वर्षका सञ्जेलले गुहेश्वरी मन्दिरमा अत्यन्त साधारण तरिकाले सुन्दरीजलकी कला अधिकारीसँग सोमबार बिहान बिहे गरेका हुन् ।
बेहुला उत्तमले ‘समता स्कुल इन्डिया’ लेखिएको टिसर्ट लगाएका थिए । खुट्टामा चप्पल थियो । बेहुली कलाले रातो कुर्ता–सुरुवालमा घुम्टो ओढेकी थिइन् । बिहेमा करिब १ दर्जन व्यक्तिहरु उपस्थित थिए ।
दुवै पक्षका परिवारका सदस्यहरु उपस्थित थिएनन् । परिवारका सदस्यहरु निम्त्याउँदा ‘उपहार लेनदेन’ को कुरा आउन सक्ने भएकाले नबोलाएको सञ्जेलले बताएका छन् ।
करिब ५ मिनेटमा बिहे सकिएको त्यहाँ उपस्थित कलाकार मनोज गजुरेलले बताएका छन् । बिहेपछि भोजका रुपमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले सबैलाई सुगर फ्री लड्डु बाँडेका थिए । लड्डुको प्रायोजन उनीहरुकै थियो ।
२५ रुपैयाँको सिन्दुर, ७५ रुपैयाँको पोते र १ सय रुपैयाँका दुई मालामा बिहे सकियो बताइएको छ । उत्तम र कलाको ४ महिना अगाडि मात्रै चिनजान भएको हो ।
उत्तमले सञ्चालन गर्ने १ सय रुपैयाँमा उपचार गरिने समता हस्पिटलमा हेल्थ असिस्टेन्टका रुपमा कला कार्यरत छिन् ।
by यूस नेपाल न्युज	 September 2, 2017
कांग्रेसको संघ र प्रदेशमा उम्मेद्धार छनोट प्रक्रिया सुरु